Tinozvirumbidza nemhinduro dzakanaka dzatinowana kubva kune vatengi vedu; chero zvakadaro tinowanzoedza kuwedzera kutonga kwedu nguva dzose. Kunzwa izvo vatengi vedu vanoda kuti vataure kuti vanoita chikamu chinokosha pakuona kuti tingavandudza sei motokari dzedu, mafambiro ekufambisa, uye mamwe mabasa evashanyi vedu vachauya. Tinokurudzira vatengi vedu kuti vatipe mhinduro yavo, zvose zvakanaka uye zvisina kunaka, saka tinokwanisa kushandira vatengi vedu gare gare.
Sandwende Mabheji ndeimwe yevatambi vakakurumbira vanotarisa muHodisha. Ini nemhuri yangu takaenda kuBhubaneshwar, Puri gore rapera. Chiitiko chaiva nematombo ejecha chaishamisa, vashandi vakanga vane ushamwari uye vakabatsira.
Zivo yevatungamiri vekufambira yakanakisisa. Rwendo rwekufambira rwakanga rwuriwo nehomwe rwakasununguka Takawana matombo ejecha tichitsvaga Bhubaneshwar Tour Package paIndaneti. Ini ndichakurudzira jecha pebble kutarisa uye kufamba kana uchida kushanyira Odisha.
Yakanga iri chiitiko chisingakanganwiki neSandra Pebbles Tours uye Travels. Mitengo yaive yakanakira uye yehutano. Kakawanda, chiitiko chinonakidza nejecha rejecha.
Nharaunda yemunharaunda yemunharaunda yakanyatsotungamirirwa zvakanaka neshamwari inoshanyira vatungamiri nemotokari yakanaka. Ini ndinogona pakupedzisira kutaura kuti kubva pakufamba kuenda kune imwe nzvimbo zvose zvakanga zvanyarara uye zvakarongeka zvakanaka. Kutarisa mberi kune mamwe mazororo neSand uye Pebbles.
Chimwe chezviitiko zvakanakisisa zvaunogona kuwana nemashizha ejecha, zvinokuita kuti ufambe uchifara uye unofara. A anofanirwa kushanyira chero ani naani ane varume ava. kuchengeteka, kunakidza uye kutengesa zvinhu zvitatu zvakakosha zvinotarisirwa nejecha rejecha.
Kana iwe uri kufamba uri woga kana nemhuri yako hazvina basa nekuti vane zvose. kukuona iwe nokukurumidza nguva inotevera nguva yejecha matombo. Nguva inotevera kana iwe uchiona iwe unyore uye uite kuti iwe uende.